4 LG G6 ပြproblemsနာများနှင့်၎င်းတို့၏ဖြေရှင်းချက်များ Androidsis
Elvis bucatariu | | Android ထုတ်ကုန်များ, LG, လဲ tutorial
18:9မြင်ကွင်း၊ Snapdragon 821 ပရိုဆက်ဆာနှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ LG G6 မှာသံသယမရှိပါဘူး အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းတွေထဲကတစ်ခု ယနေ့ဝယ်ယူနိုင်
ဒါပေမယ့်စမတ်ဖုန်းတွေလိုပဲ LG G6 မှာလည်းသူ့မှာပြproblemsနာတွေရှိတယ်၊ LG ကုမ္ပဏီ၏အဓိကပြသနာများ သူတို့ကို fix အချို့နည်းလမ်းများနှင့်အတူ။
1 LG G6 - ဘက်ထရီပြProbleနာ
2 LG G6 - Bluetooth မှတဆင့်လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ် streaming လုပ်ခြင်းပြProbleနာများ
3 LG G6 - အလင်းနည်းသောအခြေအနေများ (သို့) ရွေ့လျားနေသည့်အရာများတွင်ကင်မရာပြIssနာများ
4 LG G6 - နှေးကွေးသောပြmsနာများသို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြCrနာများ
LG G6 - ဘက်ထရီပြProbleနာ
LG G6 ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁ ရက်အသုံးပြုမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည် 3300mAh ဘက်ထရီ အကယ်၍ သင်၏ terminal ၏ဘက်ထရီသည်အလွန်လျင်မြန်စွာအားကုန်သွားလျှင် LG G6 သို့ပေါင်းစပ်ပါကအောက်ပါဖြေရှင်းနည်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ -
သင့်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဗားရှင်းကိုသွားခြင်းဖြင့်သေချာပါစေ ချိန်ညှိချက်များ> မိုဘိုင်းအကြောင်း> ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်ပြောင်းခြင်းများ> ယခုမွမ်းမံခြင်း.
ထုတ်စစ်ဆေး ချိန်ညှိချက်များ> ဘက်ထရီနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း> ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု ပုံမှန်ထက်ပုံမှန်ထက်ဘက်ထရီကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများမလိုအပ်လျှင်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
သင်အသုံးပြုရန်မရည်ရွယ်သည့်အက်ပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပါသို့မဟုတ်ပိတ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Settings> Applications ကိုသွားပါ။
မည်သည့်စမတ်ဖုန်းတွင်မဆိုဘက်ထရီအများဆုံးသုံးစွဲသည့်အစိတ်အပိုင်းသည်မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ သွားပါ ချိန်ညှိချက်များ> ပြသရန်နှင့် Always-On မုဒ်ကိုပိတ်ရန်ကြိုးစားပါဘက်ထရီသက်တမ်းပိုမိုကြာရှည်စေရန်အတွက် screen timeout သို့မဟုတ် brightness ကိုလျှော့ချပါ။
LG G6 - Bluetooth မှတဆင့်လွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ် streaming လုပ်ခြင်းပြProbleနာများ
ကားများတွင် Bluetooth စနစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်လက်ကိုင်ဖုန်းအများစုတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ Bluetooth မှတဆင့်တေးဂီတကိုဖွင့်နေစဉ်အတွင်းပြတ်တောက်ခြင်းများကြုံတွေ့ရပြီလားသို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောဆူညံသံများကြားလျှင်အောက်ပါဖြေရှင်းနည်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ -
cache ကိုရှင်းလင်းပါ Spotify (သို့) Google Play Music စသည့် streaming များအတွက်သင်အသုံးပြုသောမည်သည့် application မှမဆို။ ချိန်ညှိချက်များ> အက်ပလီကေးရှင်းများ> Spotify (သို့မဟုတ်သင်သုံးသည့်မည်သည့် app ကိုမဆို)> သိုလှောင်မှု> ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိုလှောင်ထားခြင်းသို့သွားပါ။
သွားပါ ချိန်ညှိချက်များ> ဘလူးတုသ်သင်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများကိုရှာပြီးသူတို့၏အမည်များကိုနှိပ်ပြီးရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ Unlink လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျော်စတင်ရန်။
သင့်ကားထုတ်လုပ်သူကအကြံပေးလိုမလားစစ်ဆေးပါ software ကို update များ သူတို့ကိုသင်၏ကားစနစ်တွင်တပ်ဆင်ရန်။ ဒါ့အပြင်ကြိုးစားပါ မဆိုဖျက်ပစ် ဘလူးတုသ်ကိရိယာ နေပြည်တော် သင်၏ကားမှတ်ဉာဏ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
LG G6 - အလင်းနည်းသောအခြေအနေများ (သို့) ရွေ့လျားနေသည့်အရာများတွင်ကင်မရာပြIssနာများ
LG G6 ၏ dual-camera သည်ကိရိယာ၏အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူမွေ့လျော်သည်မဟုတ်အထူးသဖြင့်အဲဒါကိုလုပ်ရင် အလင်းနည်းသောအခြေအနေများသို့မဟုတ်ရွေ့လျားနေသောအရာများနှင့်အတူ။ သင်၏ဓါတ်ပုံများသည်မှုန်ဝါးနေပြီသို့မဟုတ်သင်အရိပ်များများရှိပါကကင်မရာသည်ကောင်းသောဓါတ်ပုံများကိုမတတ်နိုင်သည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရပါကဓါတ်ပုံအားလုံးတွင်အောက်ပါဖြေရှင်းနည်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ -
မင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ နောက်ဆုံးပေါ် software ဗားရှင်း ချိန်ညှိချက်များ> မိုဘိုင်းအကြောင်း> ဆော့ဝဲလ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများ> ယခု Update ကိုသွားခြင်း။
ကင်မရာအက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီးနောက်ချိန်ညှိချက်များအိုင်ကွန်ကိုဖွင့်ပါ။ Tracking focus ကိုပိတ်ပါ နှင့်ရလဒ်များကိုပိုကောင်းလျှင်စစ်ဆေးပါ။
သင်တတ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ ကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှန်ဘီလူးနှင့်စံမှန်ဘီလူးအကြား toggle သစ်ပင်ပုံသင်္ကေတများကိုနှိပ်ပါ။
ဤအကြံပေးချက်များကိုကြိုးစားပြီးနောက်တိုးတက်မှုများကိုသင်မြင်လျှင်သို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့ပြproblemနာရှိပါက အစိမ်းရောင်အစင်း, သင် ... သင့်တယ် ထုတ်လုပ်သူကိုဆက်သွယ်ပါ အစားထိုးအမိန့်ပေးရန် LG G6 ကိုထောက်ပံ့သောစတိုးဆိုင်နှင့်အတူ။
LG G6 - နှေးကွေးသောပြmsနာများသို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြCrနာများ
LG G6 သည်အလွန်အစွမ်းထက်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးအခြေအနေအားလုံးတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သင့်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူများသည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများသို့လှိမ့်သွားသောအခါသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများရေးသားနေစဉ်မကြာခဏ "နှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ပြcrနာများ" ရှိသည်ဟုတိုင်တန်းခဲ့သည်။
သွားပါ Setting> Developer options။ ဤရွေးချယ်မှုကိုသင်မတွေ့ပါက About mobile> Software သတင်းအချက်အလက်ကိုသွားပြီး Build နံပါတ်သို့မဟုတ် Build နံပါတ်ကို ၇ ကြိမ်ဆက်တိုက်နှိပ်ပါ။ developer ရွေးချယ်မှုများကိုဖွင့်ထားသည်ဆိုသောစာတစ်စောင်ပေါ်လာပါမည်။ အခုတော့ Developer Options panel မှာ options ၃ ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ Window Animation Scale၊ Transition Animation Scale နဲ့ Animation Duration Scale။ သူတို့ကိုအားလုံးကိုထားပါ 0.5x သို့မဟုတ်လုံးဝသူတို့ကိုပိတ်ထား တဖန်သင်တို့ကခြားနားချက်ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
အခြားသူများကစွမ်းဆောင်ရည်ရှိခြင်းပြီးနောက်တိုးတက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် အဆိုပါ Force GPU ကို rendering option ကို enabled Settings> Developer ရွေးစရာများ။
LG G6 တွင်နှေးကွေးသောပြissuesနာများသည်အဟောင်းများကိုချိန်ညှိချက်များသို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းများကြောင့်နှင့်သင်၏ကိရိယာကိုသင့်ဘဝအသစ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် စက်ရုံပြန်လည်စတင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်ချိန်ညှိချက်များ> အရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်ယူခြင်း> စက်ရုံအချက်အလက်များပြန်လည်ရယူခြင်း> မိုဘိုင်းပြန်ယူခြင်းကိုသွားပါ။
ဤအကြံပြုချက်များသည် LG G6 နှင့်ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်သင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အစဉ်အမြဲကဲ့သို့ပင်အခြားဖြေရှင်းချက်များကိုအကြံပြုရန်သို့မဟုတ်ဤဆိပ်ကမ်းများရှိအခြားပြproblemsနာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးရန်မှတ်ချက်ထားရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G4 ပြproblemsနာနှင့် ၄ င်းတို့၏ဖြေရှင်းနည်းများ
Miguel Vera ဟုသူကပြောသည်
G6 သည် Snapdragon 821 ချစ်ပ်နှင့်အတူပါလာသလား။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု - ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကအချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့ပြproblemsနာပေါင်းများစွာ? MMM …
Miguel Vera အားပြန်ပြောပါ
Miguel မင်္ဂလာပါ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ LG G6 သည် Snapdragon 821 ကိုယူဆောင်လာသည်။
ကျွန်ုပ်၏ LG G6 အသစ်ကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ အသုံးပြုမှုတစ်လအကြာတွင်ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာ။ ဤအချက်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသည်၊ ၎င်းတို့သည်ခေတ်နောက်ကျသောမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်တရားမျှတလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ယခင်မိုဘိုင်းသည် Lg Flex2 ကွေးခြင်းကြောင့်၎င်း LG G6 သည်ဖန်သားပြင်အစရှိသဖြင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်အဆတစ်ထောင်လှည့်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အာမခံနိုင်သည်။ ကင်မရာ၏ကျယ်ပြန့်သောထောင့်သည် G6 နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုတည်းသောကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆိုးရွားလှသည့်အမှန်တရားမှာ“ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကံကောင်းခြင်း၊ ပထမဆုံးအကြိမ်” မှုန်ဝါးထွက်မလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဒီ terminal ကိုအမြင့်ဆုံးအဖြစ်ရောင်းလိုက်ကြတယ်။ နှင့်တစ် ဦး ပရီမီယံကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ !!
ကျွန်တော့်ချစ်သူ LG Flex2 Curve ကိုတွေ့ပါပြီ။
လုံးဝစစ်မှန်တဲ့! ငါသည်ငါ့ lg flex 100 ကွေးနှင့်အတူအကြိမ်ပေါင်း2နေဖို့။ ငါဒီစျေးကြီးတဲ့ lg g15 ကို ၁၅ ရက်ကြာသုံးခဲ့ပြီးပါပြီ။ သူရဲ့ဘက်ထရီနဲ့အတူစိတ်ရှုပ်စရာမလိုတဲ့အသုံးချဆော့ဝဲလ်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ဘက်ထရီကြောင့်စိတ်ပျက်မိတယ်။ နောက်တစ်ခုကနောက်ကင်မရာပါ။
ငါ့ကို wifi, blutou နဲ့ပြသနာတွေဖြစ်စေတဲ့ lg g4 ကလာတာ။ ငါ Motherboard ကိုပြောင်းရတယ်။ ငါ g6 နဲ့နှစ်ရက်နေခဲ့ပြီးငါပြန်ပေးတော့မယ်။ ဗွီဒီယိုကစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝကင်မရာနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမကြိုက်ဘူး။ LG G4 ကပိုကောင်းတယ် shit သွားပါက lagea ၏ထိပ်ပေါ်မှာ။ ဒီဆိပ်ကမ်းမှားသလားမသိဘူး
အမ် Lis ဟုသူကပြောသည်
Lg G6 ဖုန်းတွင်ကောင်းမွန်သောအရာများစွာရှိသော်လည်းကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံး ၀ ယ်သည်။ တန်ဖိုးမှာပြသနာများမဖြစ်သင့်ပါ။ စျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်မသိသောအလယ်အလတ်တန်းအဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သည်မှာ သင်၊ အခြားတစ်ဖက်မှအခြားသူ၊ ဟောပြောချက်၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ နားထောင်၊ နှင့်အစိတ်အပိုင်းများတွင်၊ နှစ်ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်အလွန်ဆိုးရွားသည်မှာကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖုန်းခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါ သူတို့ဟာဖြစ်သင့်သည် .. ပြောင်းလဲမှုအတွက်သင်တွင်တာဝန်မရှိပါ။ ကျောက်တုံးနှင့်ခဲယဉ်းသောနေရာတစ်ခုသို့ဖုန်းတစ်လုံးရှိရန်နှင့်၎င်းတို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုမပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုနုတ်ထွက်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးသည်။
Nestor ဂ ဟုသူကပြောသည်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြsmartphoneနာမရှိတဲ့ LG g2 ကိုသုံးပြီးတစ်လမပြည့်ခင်မှာသူက ၂ ကြိမ်ပိတ်ဆို့သွားပြီး၊ ငါ့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ဒါကိုထပ်ခါတလဲလဲမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီစမတ်ဖုန်းကိုဝယ်လိုက်တာပဲ။ ပုံစံသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်လက်မခံတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်မည်မျှပင်မှားသည်ဖြစ်စေအမှားများကိုကျွန်ုပ်အမြဲပြောနေသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ LG g2 မှားသောအခြားရွေးချယ်စရာမရှိသောကြောင့်စက်ရုံကိုပြန်လည်စတင်ရသည်။
Nestor c ကိုပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်၏ LG G6 မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ Black XY နှင့် XY ထွက်လာသည်ဆိုပါကပိတ်ထားနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်ပြန်ဖွင့ ်၍ မရပါကကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြန်လည်ထူထောင်လိုသည်။
Jesus Enrique Martínez Aguilar ဟုသူကပြောသည်
ငါ cromcats မှတဆင့်မျက်နှာပြင်မျှဝေခဲ့သည်နှင့်ယခုအချိန်တွင်ပုံရိပ်အံ့အားနှင့်ဒါကြောင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းနေဆဲ, သင်ဖုန်းကိုပိတ်ထားလို့မရပါဘူး, ငါဘာလုပ်နိုင်တယ်
Jesús Enrique Martínez Aguilar ထံစာပို့ပါ
G6 G-TUBE G5 နှင့်အမှန်တရားကိုလိမ်လည်လှည့်စားမှုလုံးဝကင်းသည်။ ကင်မရာနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကင်မရာနှင့်ဗွီဒီယို၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသည်တစ်ခုတည်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးပုံစံသည်ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ...
YouTube ပေါ်မှာ (လခပေးတဲ့) ဗွီဒီယိုများစွာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့အားသင့်စေပြီးအဆိုးဆုံးပါ။ စိတ်ပျက်စရာကြီးကြီးမားမားအတွက်ပေးဆပ်ရတဲ့စျေးနှုန်းကကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့သူတို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့လိမ်လည်မှုမှန်သမျှ ပြီးတော့ပိုပြီးနိမ့်ကျတဲ့ဖုန်းလို့ထင်ရပါတယ်။
Enrique Figueroa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်မေးမြန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာ G6 မှာ touch screen ပြwithနာရှိနေပါတယ်။ ၎င်းသည် screen ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာမလှုပ်မရှားareaရိယာရှိပါတယ်၊ icon များ၊ ထိုinရိယာရှိကင်မရာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ၁၊ ၂ နှင့် ၃ ပါ ၀ င်သောနံပါတ်များသည်သူတို့မသုံးနိူင်သောပြareနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာတွင်ထားပါကပြproblemနာပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အရာခပ်သိမ်းကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်အားလုံးနီးပါးကိုပိတ်ထားသောကြောင့်ယုတ္တိနည်းအရ၎င်းကိုငါအမြဲတမ်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကဒီပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာသိရင်ဖြေရှင်းနည်းကိုငါနဲ့မျှဝေပါလို့တောင်းပန်ပါ့မယ်။ စကားမစပ်, ငါ့ device ကိုစိုစွတ်သောဘယ်တော့မှသိရသည်။
Enrique Figueroa အားပြန်ပြောပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါတယ် ငါ့မှာ Lg G6 Android7ရှိတယ်၊ ပြီးတော့သူက Android 8 ကိုမွမ်းမံခဲ့တယ်၊ ငါမှာပြproblemနာတစ်ခုရှိလာတယ်၊ အဲဒါက "ကံမကောင်းတာကအမြဲတမ်းပေါ်နေတဲ့ဖန်သားပြင်ပိတ်ထားပြီ၊ အက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ထားရမယ်" တဲ့။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုပြန်ဖွင့်ရမည်ဆိုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပျက်စီးစေနိုင်သည်။ နီကာရာဂွာနိုင်ငံမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။ +50587588662
Byron Rizo အားပြန်ပြောပါ
ALMA မှာ ဟုသူကပြောသည်
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ ငါလုံးဝမှာမကြိုက်ဘူး။ မျက်နှာပြင်ကအမြဲတမ်းအေးခဲနေတယ်။ အပလီကေးရှင်းများသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါ၊ အလွန်လေးလံသည်၊ အလွန်ကြီးမားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ဘာသာဖွင့်ရန်မတောင်းဆိုခဲ့ပါ။ အပလီကေးရှင်းများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ၎င်းဖုန်းကိုသူတို့မထောက်ပံ့ပါ။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် - ဘာစီလိုနာ ၂၀၁၇ ကိုအခမဲ့၊ တရားဝင်နှင့် HD အရည်အသွေးမည်သို့ကြည့်ရှုရမည်နည်း